Madaxweyne Erdogan oo xariga ka jaray Terminal-ka cusub ee Garoonka Aadan Cadde (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Munaasabad kooban oo maanta lagu qabaty garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa waxaa daaha looga rogay qeybta cusub ee lagu soo kordhigay garoonka diyaaradaha Muqdisho, waxaana furay madaxweynaha dalka Turkiga, Reccep Tayyip Erdogan oo maanta booqasho ku yimid Muqdisho.
Munaasbadda furitaanka qeybta casriga ah ee dadka soo degaya iyo kuwa duulaya oo ay dhistay shirkad Turki ah oo lagu magacaabo FAVORI ayaa waxaa hadallo kooban ka jediyey madaxweynaha Turkiga, Reccep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in dhismaha cusub ee qeybta lagu kordhiyey garoonka ay ka faa’iideysan doonaan shacabka Soomaaliyeed.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan idinkala qeyb galo furitaanka Terminal-kan cusub, waxaana rajeyneynayaa in Terminal-kan uu ku soo kordhiyo Soomaaliya wax badan” ayuu yiri Recep Tayyip Erdoğan.
Madaxweynaha Soomaaliy, Xasan Sheekh Maxamuud oo isaguna munaasabadda ka hadlay ayaa dalka Turkiga iyo shirkadda uga mahadceliyey dhismaha qeybta cusub ee casriga ee Garoonka Aadan Cadde.
“Madaxweynaha Turkiga waxaan leeyahay ku soo dhawaaw dalkaaga hooyo ee labaad ee Soomaaliya, maantana taariikh cusub ayay noo tahay, booqashadaadii hore iyo tan maanta farqi weyn ayaa u dhexeysa, Horumarka ka muuqda dalka qeyb lixaad leh ayaad ku leedahay adiga iyo shacabka Turkiga” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha Turkiga oo uu la sodo madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u dhaqaaqay dhanka Isbitaalka Dekfeer, halkaasoo uu xariga ka jarayo madaxweyne Erdogan, kadib markii uu dowlddiisu dhistay.